မြန်မာတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၂-ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ဟု ဘင်္ဂါလီစစ်သွေးကြွတို့ ဆို။ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်နေရာမှာ တစ်ပြည်လုံးအနှံ့ တပ်မတော်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ကန့်ကွက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေစဉ် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဟု ပြော။ ဒုက္ခသည်များပြန်သွားနိုင်သည်အထိ တပ်မတော်ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်မည်ဟု ကတိပြု – H2Oupdatenews
မြန်မာတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၂-ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ဟု ဘင်္ဂါလီစစ်သွေးကြွတို့ ဆို။ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်နေရာမှာ တစ်ပြည်လုံးအနှံ့ တပ်မတော်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ကန့်ကွက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေစဉ် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဟု ပြော။ ဒုက္ခသည်များပြန်သွားနိုင်သည်အထိ တပ်မတော်ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်မည်ဟု ကတိပြု
ရခိုင်ပြည်အနောက်ပိုင်းရှိ စစ်စခန်းတစ်ခုကို အရုဏ်မတိုင်မီ ဝင်ရောက်စီးနင်းရာ၌ မြန်မာစစ်သား ၂၂-ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံတွင်းအခြေစိုက် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ( မူရင်း ရိုဟင်ဂျာဟုဖော်ပြ ) စစ်သွေးကြွအုပ်စုက မတ်လ ၃၀-ရက် အင်္ဂါနေ့က ပြောဆိုသည်ဟု တူရကီအခြေစိုက် အနာဒိုလူသတင်းအေဂျင်စီ AA (Mar.30, 2021 ) က ရေးသားသည်။…
အင်္ဂါနေ့ နံနက်တွင် ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (RSO) သည် မြန်မာစစ်စခန်း BP-44 ကို နံက် ၄.၃၀ နာရီမှ ၀၇.၀၀ နာရီအတွင်း စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ သေဆုံးသူများတွင် မြန်မာစစ်သား ၂၂-ဦး ပါဝင်သည်ဟု AA သတင်းအေဂျင်စီက ရရှိသည့် စစ်သွေးကြွအုပ်စု၏ ကြေညာချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။…
စစ်သား ၁၀၀ ခန့်ရှိသည့် စခန်းကို သုံးဖက် သုံးတန်မှ ဝိုင်းပတ်ပြီး စက်သေနတ်ကြီးများဖြင့် ၂-နာရီခန့်ကြာအောင် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်၍ စစ်သွေးကြွများ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့သည်ဟု အဆိုပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ပါရှိသည်။…
ဖေဖော်ဝါရီ ၁-ရက်နေ့မှစတင်ကာ အကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများကို နှိမ်နင်းရာတွင် နိုင်ငံအဝှန်း လူ ၅၀၀ ကျော် သေဆုံးမှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် မြန်မာ့တပ်မတော်အနေဖြင့် ယခုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိချေ။…
ထောင်သောင်းချီသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများနေထိုင်ရာ ရခိုင်နယ်တွင် မြန်မာစစ်သားများအား သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဆိုသော RSO စစ်သွေးကြွအုပ်စု၏ ကြေညာချက်ကို AA သတင်းအေဂျင်စီက လွတ်လပ်စွာ သတင်းအတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ။…
၂၀၁၇-ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ရက်စက်စွာ ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ထွက်ပြေးလာရသည့် ဒုက္ခသည် ဘင်္ဂါလီ ၁-သန်းကျော်တို့မှာ အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင် ခိုလှုံလျှက်ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဖိနှိပ်ခံရဆုံး လူနည်းစုအဖြစ် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂက ဖော်ပြခဲ့သည်။…
RSO သည်ရခိုင်(ဒေသ) လွတ်လပ်ခွင့်ကို လိုလားကြောင်း၊ မိခင်နိုင်ငံမှ မောင်းထုတ်ခြင်းခံရသော ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီအားလုံးတို့ကို နေရပ်သို့ ပြန်လည်ဆောင်ကျဉ်းပေးမည်ဟု ကတိပြုပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရခိုင်ဒေသလွတ်မြောက်၍ ဒုက္ခသည်များ ပြန်သွားနိုင်သည်အထိ မြန်မာစစ်တပ်ကို ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားပါမည်ဟု RSO အုပ်စု၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
((RSO ၏ အထက်ပါကြေညာချက်ဆိုသည်ကို တူရကီသတင်းအေဂျင်စီ AA တစ်ခုတည်းသာဖော်ပြခြင်းဖြစ်၍ ဒေသတွင်းနှင့် အခြားပြည်ပမီဒီယာများရေးသားခြင်းကို မတွေ့ရှိမိပါ။ ။ သတင်းဘာသာပြန်သူ))
(((AA.,Mar.30,2021,” Rohingya militants said to kill 22 Myanmar troops. Claims of attack on military post in Rakhine State as nationwide protest against military junta in Myanmar. By: Sowar Alam.” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောက်ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ )))
Previous Previous post: တရားထိုင်နေဟန် အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ရုပ်ထု အရောင်းသွက်နေ၊ စိတ်ထင်ရာ တရှုးထိုးလုပ်တတ်ရာ၌ နာမည်ကြီးသော ဒေါ်နယ်ထရမ့်နှင့် အစွန်းနှစ်ပါးပယ်သည့် ဗုဒ္ဓ၏အနှစ်သာရကို အတွေးဉာဏ်ကွန့်မြူးထား။ ဒေါ်နယ်ထရမ့် တရားအားထုတ်သင့်ပြီဟု ထုလုပ်သူ ယုံကြည်
Next Next post: အားလပ်ရက်ရှည် ခရီးသွားစည်ကားခိုက် ထိုင်ဝမ်မီးရထား လမ်းချော်တိမ်းမှောက်၊ ပိတ်မိနေသော ခရီးသည်များနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူများအား ကယ်ထုတ်နေစဉ် သေဆုံးသူ ၄၈-ဦးအထိဖြစ်လာ။ ဥမင်အဝင် မီးရထားလမ်းပေါ်သို့ လျောကျလာသော ဆောက်လုပ်ရေးသုံး ကရိန်းတင်ယာဉ်အား တိုက်မိဟုဆို